FITANTANANA NY KAOMININA : « Manohy ny asany ireo Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina » hoy ny Hcc
Tamin’ny 19 aogositra lasa teo no nandefa taratasy tany amin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (Hcc) ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, nanontany ny hevitr’izy ireo mahakasika ny fitantanana ny kaominina mandra-pifidy izay ho ben’ny tanàna vaovao hitantana azy. 23 août 2019
Omaly, namoaka ny heviny ny Hcc araka ny « Avis n°08-HCC/AV » nivoaka tao amin’ny tranokalam-pifandraisany ho valin’ ny tataratasy nalefan’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian, voalaza tetsy ambony.
Nohazavain’ny Hcc fa tapitra amin’ny 18 septambra 2019 ny fe-potoana farany iasan’ny Ben’ny tanàna, ary tsy miankina amin’iireto farany ny fanemorana ny fifidianana fa ny governemanta sy ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana no manapaka ny mahakasika izany. Mangina tsy ahitana rijan-teny rahateo, na ny Lalàmpanorenana, na ny lalàna, manoloana io fahabangana io. Etsy andanin’izay anefa, ilaina ny fitohizan’ny asam-panjakana eo anivon’ny kaominina mba tsy hampihantona ela ireo izay mila izany. Ny kaominina rahateo no isan’ireo akaiky ny vahoaka indrindra.
Nilaza ny heviny ny HCC fa « manohy ny asany ihany ireo Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina mandra-pifidy ireo Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina vaovao. » Notsipihin’izy ireo ihany koa fa « Tsy mahasolo Ben’ny tanàna tapitra fe-potoana iasana ny fametrahana mpisolo toerana. » Araka izany, raisina ho toy ny mametra-pialana avy hatrany ireo ben’ny tanàna sy mpanolo-tsaina mirotsaka hofidiana mandritra ny fifidianana.